DEG DEG+AKHRISO: Khilaafkii ugu xumaa oo soo kala dhexgalay wafdiga S/Land ee kusugan Laascaanood. – Puntlandtimes
DEG DEG+AKHRISO: Khilaafkii ugu xumaa oo soo kala dhexgalay wafdiga S/Land ee kusugan Laascaanood.
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Warar hoose oo aan ka helnay ilo ku dhow dhow badhasaabka gobolka sool Gargaar Hussein Arab ayaa sheegaya in badhasaabkii uu cadho uga maqan yahay gobolka sool iyadoo ay gobolka ku sugan yihiin wufuuf kala duwan oo uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin iyo Afhayeenka baarlamaan Baashe Maxamed Faarax.
Wararka ayaa sheegaya in badhasaabku uu saluugay qaabka ay wax uwadaan weftiga oo uusheegay inaysay waxba kusoo dhamaaneen.
Badhasaab gargaar ayaa sadexdii cisho udanbaysay ku sugnaa magaalada hargaysa wuxuuna sheegay inuu iscasili doono hadii aan wax laga badalin qaabka ay usocoto nabadaynta beelaha walaalaha ee ku diriraya koonfurya gobolka sool.
Sidoo kale wasiir Waxbarashada Somaliland ayaa dhankiisa ku laabtay hargaysa lama oga sababta uu weftiga uga noqday iyadoona hada laascaanood ay ku sugan yihiin oo kali ah wasiir maxamed kaahiin iyo gudoomiye baashe.